Turkiga oo sheegay in reer galbeedka ay daboolayaan dilkii jamal Khashoggi – The Voice of Northeastern Kenya
Turkiga oo sheegay in reer galbeedka ay daboolayaan dilkii jamal Khashoggi
Star FM January 22, 2019
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga, Mevlut Cavusoglu ayaa wadamada reer galbeedka ku eedeyay inaysan si buuxda daaha uga rogin oo ay qarinayaan dilkii 2-dii bishii tobnaad ee sannadkii hore lagula kacay wariye Jamal Khashoggi.
Suxufigan ayaa dhalasho ahaan ka soo jeeday Sacuudiga balse waxaa lagu xusuustaa inuu si weyn u dhaliili jiray hoggaanka sare ee Boqortooyada.
Waxaa uu maqaalo ku qori jiray wargeyska ka soo baxa gudaha Maraykanka ee The Washington Post ka hor inta aanan looga takhalusin gudaha qunsuliyadda Sacuudi Carabiya ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Mr. Cavusoglu ayaa kulan ay ka soo qeyb galeen dhalinyaro badan ka sheegay inay dareemayaan in wadamada ka hadlo xuriyatul qowlka ay daboolayaan dilkii wariyaha kadib markii sida uu hadalka u dhigay lacago la siiyay ama loo ballanqaaday.
Wasiirka ayaa intaasi ku daray in dowladda Turkiga ay isku diyaarisay in baaritaano caalami ah lagu sameeyay dilkii Khashoggii maalmaha soo socdana ay tallaabooyin wax ku ool ah qaadayaan.
Dowladda Turkiga ayaa horay u dalbatay in Sacuudiga uu soo tarxiilo muwaadiniintiisa lagu eedeyay dilkii wariyaha.
← Dhalinyarada oo la shaqaleysiinaya kadib marka la tijaabiyo
Suudaan oo ay weli dibadbaxyo ka socdaan →